Matongerwo eNyika, 20 Zvita 2017
Chitatu 20 Zvita 2017
VaBiti naVaChamisa Vanoramba Kuti MDC Alliance Yakanokumbira Kuwedzerwa kweZvirango
Mubatanidzwa weMDC Alliance wati kushanya kwevamwe vatungamiriri vawo kuAmerica kwanga kuri kunobudisa Zimbabwe mumatope mairi uye kuti hurumende yaVaMnangagwa iite sarudzo dzejekerere.
MDC-T Inotambira neMufaro Kusarudzwa kwaVaCyril Ramaphosa
Bato reMDC-T rinoti rinofadzwa zvikuru nekusarudzwa kwakaita VaCyril Ramaphosa semukuru we African National Congress yekuSouth Africa.
Va Ramaphosa Vanosarudzwa Kumirira ANC Musarudzo yeMutungamiri weSouth Africa
utevedzeri wemutungamiri weSouth Africa, VaCyril Ramaphosa, vava kutarisirwa kuzoitwa mutungamiri wenyika iyi kana vakakunda musarudzo yemutungamiri ichaitwa. Izvi zvinotevera kukunda kwavakaita musarudzo yemutungamiri webato reAfrican National Council, nezuro.
ZimRights Yokurudzira Vanhu Kuti Varambe Vachinyoresa Kuvhota
Chirongwa chekunyoresa vanhu kuvhota boka rinoona nezvesarudzo munyika reZimbabwe Electoral Commission, ZEC, richipinda muvanhu chapera munyika yose paine vanhu vanosvika 4 630,095 vakanga vanyoresa kuvhota pakupera kwezuva musi weMuvhuro.
Vakawanda Voshoropodza Hurongwa hweKuda Kushandisa Mauto Musarudzo
Mashoko akataurwa naVaJosiah Hungwe, pamwechete naVaChris Mutsvangwa, ekuti bato riri kutonga reZanu-PF richashandisa mauto mukutsvaga rutsigiro musarudzo dzegore rinouya, ari kushorwa zvikuru neveruzhinji.
MDC-T Inobatsira neChikafu Mhuri dzeNhengo Dzakashungurudzwa
Bato reMDC inotungamirwa naVaMorgan Tsvangirai neMuvhuro rakapa hama dzevanhu vakavhiringwa nemhirizhonga, kana kusungirwa zvematongerwo enyika, chikafu chekudya pazororo reKisimusi.